အားလပ်ရက်တွေမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘယ်လိုအချိန်ဖြုန်းကြမလဲ?
12 Oct 2018 . 2:39 PM
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းတယ်ဆိုတာ အမြဲတမ်းပျော်စရာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုလိုမျိုး ကိုယ်စီအလုပ်တွေနဲ့ နေ့ရက်တိုင်းကို ကျော်ဖြတ်နေရတဲ့အချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ပြီး အချိန်ပေးဖို့က ပိုပြီးခက်ခဲလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလို အောက်တိုဘာလလိုမျိုး သီတင်းကျွတ်အားလပ်ရက်တွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ ပိုပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အချိန်ပေးလို့ရလာပါပြီ။
အဲ့တော့ သူငယ်ချင်းတွေအတူရှိနေတဲ့နေရာမှာ ဘယ်လိုမျိုး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ အချိန်ဖြုန်းကြမလဲ? အခုဒီ Article လေးမှာ ပျော်စရာအခိုက်အတန့်လေးတွေကို ရရှိအောင် ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်မယ့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတွေကို ပြောပြမယ်ဆိုရင် လိုက်လုပ်ကြည့်ကြမလား?
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ကိုယ့်ဖုန်းကင်မရာနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်တာက အမြဲတမ်းပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်အချင်းချင်းဓါတ်ပုံရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ရူခင်းပုံတွေ၊ Portrait ပုံတွေရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီးတော့ ဘယ်သူကပိုကောင်းတဲ့ပုံရိုက်နိုင်သလဲဆိုတာကို ပြိုင်ကြည့်ကြည့်ပါ။
သူငယ်ချင်းတွေ အိမ်မှာစုပြီး အိပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ညလုံးပေါက်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာက ပျော်စရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကို ဖန်တီးတာကလည်း ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြုန်းနည်းတစ်ခုပါ။ TV Channel တွေက တစ်ညလုံးလာနေတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေဝယ်ထားပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် ဇတ်လမ်းတွဲတွေကို ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဆို ပျော်စရာကောင်းမှာအသေအချာပါပဲ။
သူငယ်ချင်းတွေ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ တစ်နေရာထဲမှာ ချိန်းတာထက် အပြင်ကိုလျှောက်သွားတာကလည်း တကယ်ကို မတူထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံအသစ်ကို ခံစားနိုင်စေမှာပါ။ Shopping Center တွေ၊ ပန်းခြံတွေနဲ့ တခြားအနားယူလို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေကို လျှောက်သွားပြီး အမှတ်တရာဓါတ်ပုံတွေရိုက်ထားတာကလည်း တော်တော်လေးကို ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုရမှာပါ။ မကြာသေးခင်ကမှ Samsung ကအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Galaxy J6+ ရဲ့ Dual Camera မှာပါဝင်လာတဲ့ Live Focus လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ဆိုရင် ကိုယ့်တစ်သက်တာအမှတ်တရဖြစ်စေမယ့် ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ရိုက်ကူးသိမ်းဆည်းထားနိုင်မှာပါ။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်မှာ ညစာစားတာထက် အိမ်မှာ Dinner Party လုပ်တာကလည်း တော်တော်လေးကို ကောင်းတဲ့အမှတ်တရတွေကို ဖန်တီးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ အပြင်မှာစားတာထက် သူငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဟင်းချက်စားကြတာကလည်း တကယ်ကို ပျော်စရာပါ။
အခုလိုမျိုး ဖုန်းတွေကိုယ်စီရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ပြုလုပ်သင့်တဲ့နောက်ထပ်အရာတစ်ခုက ရုပ်ရှင်ရိုက်ကြည့်တာပါ။ လုပ်ရမှာက သူငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ ရိုက်ချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်အတွက် ဇာတ်ညွန်းတွေ၊ ဇာတ်ကွက်တွေကို အတူစဉ်းစားပြီးတော့ အဲ့အတိုင်းရိုက်ရုံပါပဲ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်လိုမျိုး ကိုယ်တိုင်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရိုက်ပြီးတော့ ဖုန်းပေါ်မှာပဲ အလွယ်တကူ Edit လုပ်ပြီး ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖန်တီးကြည့်တာကလည်း ပျော်စရာတစ်ခုပါ။
ဒီ Samsung Galaxy J6+ ဖုန်းမှာဆိုရင် Dual Camera စနစ် ၊ 6″ Infinity Display နဲ့ ဒီဇိုင်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ Side Fingerprint Scanner ပါဝင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခု Galaxy J6+ စမတ်ဖုန်းကို လှပတဲ့ အနက်ရောင်၊ မီးခိုးရောင်နဲ့ အနီရောင် စသဖြင့် ၃ ရောင်ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ လာမယ့်အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်ကနေ စတင်ပြီး ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။